Myanmar Gays Heaven: Ohh....My God
Comment လေးများ ပေးသနားကြပါဦးနော်.... ခုမှစလုပ်တာဆိုတော့ comment လေးမြင်မှအားရှိတာဗျ ဟဲ..
Posted by Myanmar Gays Heaven at 8:22 AM
အဲလို လီးကြီးမျိုးနဲ့ bareback ခံချင်လိုက်တာဗျာ။ admin ရေ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ရည်းစား တယောက်လောက်လည်း လိုချင်တယ်ဗျာ။
Anonymous October 6, 2013 at 11:41 PM
Anyone want to fuck me deeply inside?
Alex October 16, 2013 at 10:54 PM
Yes,I want.How shall we meet outside?Tell me place and time to meet!Plz reply!
yeyintaung October 16, 2013 at 11:30 PM
အဲလိုလီးမျိုးကြီးနဲ့ ၂ နာရီလောက်ခံချင်တယ်၀၉၄၀၀၃၀၆၇၅၁ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ Viberလည်းတင်ထားတယ်
Aung Win April 25, 2017 at 5:06 AM
yeyintaung October 16, 2013 at 11:32 PM
Alex October 18, 2013 at 10:31 AM
If you want to contact me,plz write as English cuz I have no Myanmar font.Thank you!
ma p ta p October 29, 2013 at 9:32 AM
Anonymous April 25, 2014 at 11:48 PM